DAAWO:- Puntland oo awaamir culus kusoo rogtay dhalinyarada ku nool gobolka Mudug. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Puntland oo awaamir culus kusoo rogtay dhalinyarada ku nool gobolka Mudug.
Arintaan ayaa kusoo aadaysa xilli magaalada Gaalkacyo ay kusoo badanayaan dhalinyaro habeenkii fowdo kasameeya xaafadaha Magaalada Gaalkacyo.
Previous articleDAAWO:- Xisbiga Wadani oo mucjiso kutilmaamay kala hadalka madaxda Somaliland “Markabka yaa sii daayay?”.
Next articleDAAWO:- Hogaamiyihii kooxdii weerartay Hotelka Kismaayo oo waraysi lala yeeshay shaaciyayna sababta ay udoorta Hotel Cascaseey.
Atoore July 16, 2019 At 11:56 pm
Ciddii wax u dhimaysa ammaanka guud ahaan soomaaliya waa u cadaw shacabka soomaaliyeed ee waa in la soo qab-qabtaa oo kii dambi lagu helo la marsiiyaa waxuu mudan yahay.Soomaaliya waa ka caadi markii ay ciidamadu soo qabtaan wiilal dambiilayaal ah baa waxaa ka dabo yimaada dad u dacwoonaya oo leh wiilkaygu waxba ma suubin.Markii horena waxaa dadkaas laga waayey war ceshada wiilashiina.